(Daawo):- Hogaamiyaha K/Galbeed iyo Wafuud Caalami ah Oo Ka Qeybgaley Sii Sagootinta Taliyaha Ciidamada Itobiya Ee Fadhgooda Yahay Beydhabo. – hareerley News
Hogaamiyaha DGKGS. Iyo Wafuud Caalami ah oo Ka qeybgaley Munaasabad Lagu sagootinaayay Taliyhii hore Sectar amaba Qeybta 3aad laguna soo dhaweynaayay Taliyaha Cusub qeybtaas,
Taliyihii Ciidamada Amison ee K/Galbeed oo dhawaan Xilkaasi laga Qaaday ayaan Xilka ku Wareejiyay Taliye Cusub oo la soo Magacaabay.
Posted by Universal Somali TV on Tuesday, September 24, 2019
Dowlada Kuwayt Oo Diyaarineysa Shir aan looga Baran Carabta Oo lagu taageerayo Somalia
Ku xigeenka Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Kuwait Khaled Al-Jarallah ayaa shaaciyey in wadankiisa uu marti gelin doono shir lagu taageerayo Soomaaliya . Wasiirka ayaa sheegay in shirkaas oo ah mid Soomaaliya looga caawinayo dhanka Waxbarashada oo ay ka liidato uuna dhici doono sanadka soo socdo ee 2020 kaasoo lacago loogu deeqi doono. Wakaaladda Wararka […]
Wasiirka Wasaarada Gargaarka iyo maareynta Maamulka KGS Oo Dib ugu laabtey Magaalada Beydhabo:-(Sawiro)
Wasiirka wasaarada gar_gaarka Iyo maareynta musiibooyinka DGKGS c/naasir cabdi caruush ayaa maanta dib ugu soo laabtey gudaha magaalada baydhabo kadib markii safar mudooyin kii ugu danbeeyey ugu maqnaa qeybo kamida wadamada Scandinavian_ka. Waxana wasiirka gegida diyaaridaha baydhabo siweyn ugu soo dhoweeyey xubno ka tirsan wasaarada oo ay ugu horeeyaan wasiirka Ku xigeenka wasaarada mudane c/qaadir […]
Ammaanka Magaalada Dhuusamareeb oo si weyn Oo xoogan loo Adkeeyay.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Caawa si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada Dhuusamareeb. Ciidamada Booliska Soomaaliya ee dhawaan la geeyay Magalada ayaa Caawa ku sugan inta badan Isgoyska Magaalada iyo Wadooyinka laga soo galo. Waxaa sidoo kale si weyn loo adkeeyay Ammaanka Garoonka Diyaaraddaha ee Magaalada Dhuusamareeb, waxaana […]